Shandira Nyaya - Raymin Ratidza Zvigadzirwa Co, Ltd.
Rezve dhizaini yeiyi pallet inoratidzira, mutengi anga asina zvinodiwa zvakajeka pakutanga, uye izvo zvataive nazvo kubva kwaari ndeye Walmart Packaging Standards Guideline. Mutengi haana kana zano zvachose nezvekuti vangaratidza sei zvigadzirwa zvepati ravo. Ivo vakangotiudza izvo zvaizoratidzwa pane ino unit.
Sezvo isu taive neinjiniya timu tinoziva Walmart Ratidza Zvinodikanwa chaizvo, Takakurumidza kugadzira 3D kupa kune kwavo mareferenzi.
Mushure mekumhanya kwakawanda kwekutarisa iyo Guideline uye kusimbisa nemutengi, isu takazosimbisa saizi, uye ndokutumira iwo akafa mutsara matemplate kune mutengi kune mifananidzo yekugadzira. Mutengi anowanzo fanira kutora mazuva mashanu kutenderedza kuti apedze yavo yekugadzira dhizaini. Iyo mifananidzo inofanirwa kunge iri AI kana PDF faira Mushure mekutambira mifananidzo, isu tinobva takurumidza kutarisa kana paine mafonti asipo, uye tinotumira kudzoserwa mvumo kumutengi kuti aongorore cheke asati asekesa sampuro.
Mushure mekuti mutengi ape dhizaini yekugadzira, kambani yedu yakagadzira muyenzaniso yemuvara kuti mutengi asimbise. Sezvo Walmart iine chinodikanwa chakakwirira pavara, ivo vakapa mvumo yemuvara kwatiri kuti titevere iwo ruvara kana tichigadzira muyenzaniso. Iyo fekitori inoda kuteedzera iwo ruvara padhuze sezvinobvira kune iwo muenzaniso sampuro yakapihwa.
Isu tinonyatso shandisa iyo GMI color manejimendi sisitimu panguva yekudhinda maitiro kuona kudzikama kwemavara mune yega yega batch yekudhinda maitiro. Izvi hazvibatsire chete ruvara rwechikamu chimwe nechimwe kuti rwukwane zvakanaka, asi zvakare tonga musiyano wemavara pakati pezvitsva uye zvekare kudhinda.
Iyo yakanaka printa ndeye yakanaka mhando controler pane imwe nhanho yemakadhibhodhi ratidza kugadzirwa kwakawanda. Isu hatine hanya chete nezve kudhinda, asi zvakare tinotarisira nezve kana chinhu chayo chaive chakasimba zvakakwana kuti chibate uremu hwechigadzirwa. Semuenzaniso chena yaigona kushanda zvakanyanya kuti mutengi aite bvunzo. Isu tinopa chena sampuli yemahara, uye pre-odera chena sampuro yekutevera chimiro yaive zvakare inoshanda.
Chikwata chekugadzira chinogona kutarisa kana zvese zvaive nenzira kwayo. Ivo vanogona kukurumidza kuziva kana paine zvikanganiso pano. Isuwo tichaunganidza chiratidziro kunze kuti tione kuti zvinhu zvese zvakarurama, zvisati zvaendeswa kumutengi.